Nezvedu - Hebei Haorui International Trading Co., Ltd.
Unyanzvi, Kuvimbika, Hunhu, Sevhisi, Kugadzira, Hebei Haorui anga akanamatira zvakachengetedza kune iyo yakazara bhizinesi uzivi kubvira pakagadzwa. Vashandi vese vachipa nguva yakawandisa nesimba kuwana zvido zvemusika, HAORUI yakazvipira kupa imwechete yekumira Yekunze neyekunze zvigadzirwa uye kutsvaga mhinduro kune vatengi vekunze kwenyika.
Anoda kusvika makore makumi maviri, HAORUI inochengetedza kubatana kwenguva refu pamwe nesupamaketi huru inotungamira yeEuropean.Work nemagiriza akasarudzwa uye akaongororwa eA nhanho yekupa vatengi nemutengo wakaderera garandi.Zvino HAORUI inonyanya kubata mumapoka matatu makuru echigadzirwa--Zvinhu zvekugezera, Zvemitambo & Hutano zvigadzirwa, Matanda Ematanda.
Matanhatu e Management Management
Technical R & D dhipatimendi
Kuchengeta kushanda uchishanda mundima inoenderana kuronga nezvechigadzirwa info. Shanda zvishandiso mumabasa akasiyana siyana uye dhizaini zvinoenderana nezvinodiwa chaicho nevatengi vese.
Yakanyatsodzidziswa Dhipatimendi Rekutengesa & Revhisi
Kutarisa pakutsvaga kwemagetsi, manejimendi cheni manejimendi, manejimendi mutengo. Shanda maitiro ese ehurongwa hwese kubva kubvunzurudza kusvika kurodha mudziyo. Ipa mutengi yakazara uye yakatsanangurwa sevhisi.
Specialised Hunhu manejimendi dhipatimendi
Wongorora uye tarisa iyo yose nzira yekugadzira, kubatsira dhipatimendi rekutengesa uye kugadzira nezvehunyanzvi hwekugadzira kudzora uye kugadzirisa. Ita shuwa nhumbi dzakaunzwa mune yakanakisa mamiriro.
Zvitifiketi manejimendi dhipatimendi
Nyorera zvitupa zvakadzoserwa kubva kumakungwa emaketi, ronga kuyedzwa neSGS, TUV, BV, Hohenstein, Intertek nemamwe marabhorari ebato rechitatu. Ipa chiratidzo chedhata nezvezvinhu zvinoshandiswa mukugadzira.
Logistic manejimendi dhipatimendi
Manage yekutakura zvinhu, in charge for the goods delivery process. Kupa yechitatu-bato zvigadzirwa zvevatengi kune vekunze vatengi.
Mushure-kutengesa dhipatimendi rebasa
Unganidza mhinduro kubva kumakets, upe rubatsiro pamusoro pekushandisa chigadzirwa uye yekuchengetedza mirayiridzo. Gadzirisa kunyunyuta uye mhinduro.
Nechishuwo chikuru uye nehunyanzvi timu, HAORUI ndiyo yako yekutanga sarudzo yekugadzwa kuiswa!